धरापमा पर्न आँटेको बन्द, हड्ताल व्यवसाय | मझेरी डट कम
“आज कसैको हड्ताल छ कि छैन भाइ ?” मैले सोधें ।
“आज दिउसो ता हड्ताल छैन सर, बेलुकीपख राँके जुलुस गर्नुपर्ने भएको छ । किन सोध्नुभो ?” उसले भन्यो ।
“हैन मेरा मामा खसेको हुँदा मलामी जानु थियो, हडताल छ कि भनेर सोधिराखेको ?” मैले भनें ।
“दिउसो ता छैन, भरे राति भने राँके जुलुस गर्नुपर्या छ ।” उसले भन्यो । “उसो भने सखारै गएर मलामीमा सामेल भई चाँडै फर्कनुहोला, फेरि साँझतिर ता हामीले राँके जुलुस गर्नै पर्छ । उसले फेरि थःप्यो ।
“आजको राँके जुलुसको काम कसका लागि गर्ने भएका छौ भद्र भाइ ?” मैले हँस्यौलीकै पारामा भद्रे भनेर चिनिने मेरा नजिकैको त्यस छिमेकीलाई सोधें जो तीन वर्षदेखिका मेरो क्षेत्रतिर व्यवस्थापन गर्ने हडताल एन्ड कम्पनीका मुख्य प्रोप्राइटर नै हो ।
उसले पनि कुनै सर्म नमानीकन भन्यो– “आज घैले घ्याम्पे समाजलाई दिएका छौं ।” उसको कुरा मैले राम्रो बुझिनँ अनि सोधें–“घैले घ्याम्पे भन्नाले ?”
‘भन्नाले घरघरमा चप्पल, जुत्ता, हाड, बोरा, मासी, युरिया अरु केकेजातिहरू हालेर जाँड पार्ने पार्टीहरुलाई सरकारले कडाइ गर्यो अरे । उनीहरुले आज हडताल गर्ने भाछन्, उनैहरुका लागि साँझ पख सडकमा अलिकति राँके जुलुस गरिदिनुपर्या छ ।”
“हँ, त्यस्तो रक्सी ख्वाएर कति मान्छे ठहरै भाका छन्, तिमी चैं फेरि तिनैका लागि राँके जुलुस गर्न तयार भएछौ । यो काम उति राम्रो हो र ?” मैले सोधें ।
“मेरो ता पेसो हो सर, मलाई ता पेशा चलाउनु छ, कसले के बनाउँछ, कसले के खान्छ, को के खाएर मर्छ, मलाई यसमा फिक्री छैन । खाएर मर्छ भन्दैमा बिख उद्योग नै बन्द गर्नु ता भएन नि सर । फेरि मलाई ता यही पेशा गर्नेहरुले पैसा पनि राम्रो दिन्छन् । आज अलिक बढी झ्याम्लेहरुलाई नखोजी भएको छैन ।” उसले दार्शनिक शैलीमा निःशङ्क भन्यो ।
“झ्याम्लेहरू पनि पो अहिले ता उति पाउन छाडियो । आ, बरु दाम उतै राम्रो पाइन्छ, जिउँदेमा दाम नपाए शहीद भइहालिन्छ, उतै पो जानु पर्यो भन्छन्, झ्याम्लेहरुको आकर्षणको थलो अहिलेलाई पार्टीहरू नै भएका छन् । मेरो ता पेशा पो मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।” उसले चिन्ता प्रकट गर्यो ।
“भोलि पनि कसैको राँके जुलुस छ कि ?” मैले सोधें ।
“अहँ राँके जुलुस ता छैन, अर्कै छ । बिहानैदेखि गाडी बन्द गर्ने भन्ने कुरा छ । तिनीहरुले भने पैसा अलिक थोर दिएका छन् । अर्कोले फेरि ठेक्का हात पार्ला र बाटोको हड्ताल ठेक्का लेला भन्ने ठानेर हातमा आएको काम गुमाइनँ । त्यतै जानु छ ।” म अचम्म पर्दै सुनिरहेको थिएँ । ऊ भाटा ताछिरहेको थियो ।
“गाडी बन्द गर्न के गर्छौ ?” मैले सोधें ।
“हातमा आएको काम गुमाउनु ता भएन नि । कि कसो त सर ?” उसले अघिकै प्रसँग यथावत् राखिछाड्यो ।
“गाडी बन्द गर्न के गर्छौ नि त ?” मैले अघिकै प्रश्न दोहोर्याएँ ।
“के गर्नु नि । गाडी बन्द भन्नासाथ यसै पनि हामीलाई अहिले सजिलो भएको छ । केही गर्र्नै पर्दैन । आफैं बन्द गरिहाल्छन् । तैपनि बाटोमा टाएर बालेपछि पुगिगयो नि । त्यति गर्दा पनि कथ म अटेर गरे भने यसो अभिन्तरमा बसेर ढुङ्गा हान्नुपर्छ, सिसा फुटाउनुपर्छ ।” उसले भन्यो र अँझै थप्यो– “र त्यतिले पनि अटेरी गरेर कसैले गाडी चलाइहाल्यो भने मटितेलको जोहो पनि गरिएकै हुन्छ, रोकेर दन्काइदिनुपर्छ नि ।”
“भोलिको हड्ताल कसको नि ? मैले सोधें ।
“खै चौथो हो कि तेस्रो हो लिङ्गीको अरे । मता उति बुझिरहन्न पनि पो ।”
“पैसा ठिकसँग पाइएला के त ?”
“नपाए तिनैको घरमा राँको सल्काउनुपर्छ अनि बजियालाई ठिक हुन्छ । काम गरेपछि दाम नदिएर धर !”
यो साधारण जस्तो लाग्ने कुराकानी मेरा छिमेकीसँगको हो । ऊ चारपाँच वर्षदेखि हड्ताल व्यवसायको एकाधिकारी छ । सबैका पार्टीमा हड्ताल, जुलुस, नारा, चक्काजाम, लठ्ठी हान, खुट्टा भाँच कार्य गर्ने कार्यकर्ताहरू सबकोहीकोमा हुँदा रहेनछन् । त्यसैले त्यस्तो विधिको काम पार्टी र हड्ताल गर्ने संस्थाले गर्नै पर्ने भए भद्रसिंहको डफ्फालाई दिने गरेको रहेछ । मलाई भने उसको भद्रतादेखि खुसी पनि लाग्छ । ऊ नढाँटी भन्छ सबै कुरा ।
काम नपाएर अनि अवसर नपाएर विदेशिनेहरुले भद्रबाट सिके हुन्छ । उसको घरमा गएर हेरे सबै मन्त्र बुझिन्छ । त्यो मान्छेको घरमा बाँसका भाटाहरुमा पुल्ठा बनाएर राख्ने कामको व्यवसाय निकै नै फलदायी भएछ, फस्टाएछ । उसले पोहोरदेखि नै यो काम गर्न थालेको छ । अहिले उसको घरमा बाँसको भाटाहरू तिखार्ने, ताछ्ने र तयारी गर्ने केही मान्छे पनि राखेको छ । नारा र प्लेकार्ड बनाउनेहरू पनिरहेछन् । उसको कुरा सुनेर र उसको आशय बुझेर म निकै अचम्ममा पर्दै मामाको मलामी हुन जानलाई गाडी कुर्न लागें । आधा घन्टा कुर्दा पनि गाडी नआएपछि बुझियो आज गाडीहरुले नै चक्काजाम गरेछन् । आफू खुसी भाडा बढाउन पाउनु पर्छ भन्ने उनको माग रहेछ । अनि म मृत मामाको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै बाटैबाट फर्किएँ घरतिर ।
घर फर्कंदै गर्दा मैले सम्झिएँ, अब भद्रेको सूचना पनि काम लाग्दो भएनछ । गाडीका चक्का जाम गर्न भने भद्रेको खाँचो नै पर्दोरहेनछ । उनीहरू नै भद्रेका महाभद्रे रहेछन् । गाडी व्यवसायीले जस्तै अरु अरु संघसंस्थाहरुले आफैं भदं्रे जस्ताहरुको सहयोग विना नै हड्ताल गर्ने हो भने अथवा हड्ताल गर्नेले कुनै भरौटाहरू नराखी हड्ताल गर्न थाल्ने हो भने नेपालमा हलक्कै बढेको हड्ताल व्यवसायीको रोजी रोटी पनि गुम्ने छाँट आएछ बा.... !
नागरिकमा २०६८ माघ २४ गते प्रकाशित
स्पष्ट विचारका कविताहरू
म अनि यी कविताहरू
भ्रमको रात र सम्भावनाको विश्वास
जीवनको जटील मोडमा साथ दियौ तिमीले
मरेपछि मेरो शरीर आँसु झर्ने तिमी हुनु
मै डल्दै हिंड्दा कतारभरि
इटहरिका रमाइला अनुभूति
रमेशलाई कमिलाले पाठ सिकायो
अर्को साल आउँछु भन्थे
चप्पल छिने के भो र यात्रा जारी छ